အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အဘိဝံသဘွဲ့ကြီးဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သောစစ်​ကိုင်း မြစကြာ​ကျောင်းတိုက်​ကသာသနာ့အာဇာနည် – XB Media Myanmar
တစ်နှစ်မှနှစ်ပါး ၊သုံးပါးလောက်သာပေါ်ထွက်တတ်တဲ့အဘိဝံသ ဘွဲ့ဆိုတာကျက်မှတ်ဖြေဆိုရတာ ခက်ခဲလွန်းလို့လူသတ်ပွဲ ရဟန်းသတ်ပွဲလို့တောင်နိုင်ငံကျော် ကမ္ဘာသိဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက မိန့်ခဲ့ဖူးပါသတဲ့။ဒါပေမယ့်ကျော်လွန်သွားနိုင်သူဟာ အာဇာနည်တွေ ပါပဲ။အဘိဝံသဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးကို သိရှိသူတိုင်းဟာတန်ဖိုးထားကြတယ်။င်ငံခြားသားများသည်ပင်လျှင်အဘိဝံသဆိုတာကို တန်ဖိုးထားပြီးတော့လေးစားကြတယ်သိရှိနားလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတိုင်းဟာအသိအမှတ်ပြုထားတယ်။
လူသတ်စာမေးပွဲ (ခေါ်) မန္တလေး-သကျသီဟ အဘိဝံသ-စာမေးပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ လမ်းညွှန်မန္တလေးမြို့၌ ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ အသင်းကြီးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအသင်းကြီးကို ‘သကျသီဟအသင်း’ ဟုလည်း ခေါ်စမှတ်ပြုကြသလို့ရဟန်းတော်တွေရဲ့ သာသနာဘောင် လောကဝယ် နာမည်ကြီးတဲ့ အသင်းဆိုလည်း မမှားဖွယ်ရာ မရှိပေ . . . ။
ထို ‘ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ အသင်းကြီး’ က ကြီးမှူး-ကျင်းပသော စာမေးပွဲ အထွေထွေ ရှိကြပါတယ်။ထိုထို အသင်းဆိုင်ရာ စာမေးပွဲများသည်ကား သကျသီဟ အဘိဝံသဘွဲ့ (ခေါ်) ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ ဓမ္မာစရိယ ဘွဲ့ (အဘိဝံသစာမေးပွဲ) ၊သာမဏေကျော်ဘွဲ့ (ခေါ်) ပရိယတ္တိ သာသနာလင်္ကာရဘွဲ့ (အလင်္ကာရစာမေးပွဲ) အပြင် နိကာယ်ဘွဲ့ (ခေါ်) နိကာယ်စာမေးပွဲများလည်း ရှိကြပါသည်။
ထို ‘သကျသီဟ အဘိဝံသဘွဲ့ (ခေါ်) ပရိယတ္တိ သာသနာဟိတ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ ရရှိဖို့အတွက် အသက်တော်အားဖြင့် (၂၇) အတွင်း ရှိသော ရဟန်းပျိုများသာ ဖြေဆိုခွင့် ရကြမည် ဖြစ်ပြီး ၊ထိုရဟန်းတော်များသည် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည့် အခြေခံ စာသင်တန်းသို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ထို ‘ပရိယတ္တိ သာသနာဟိတ အသင်းကြီး’ ၌
(၁) : သီးခြား စာသင်တန်း နှင့်
(၂) : – စာချတန်း (တစ်နည်း) ဓမ္မာစရိယတန်း ဟူ၍ တန်းအားဖြင့် နှစ်တန်း ခွဲခြားထားပါသည်။အခြေခံ စာသင်တန်းကို ဝင်ရောက်လို့သူများသည် ပရိယတ္တိ အခြေခံပညာသည် ပထမပြန် ကြီးတန်းဆင့် ရှိထားကြရပါမည်။အသက် (၂၇) ၊ ဝါတော်အားဖြင့် (၇) ဝါထက် မကြီးသော မည်သည့် ရဟန်းပျိုများ မဆို လွတ်လပ်စွာ ဖြေဆိုခွင့် ရှိကြပါသည်။
ထို ‘အခြေခံ စာသင်တန်း’ တွင်
(၁) : – အာဂုံ ပြန်ဆိုခြင်း နှင့်
(၂) : – သဘော ရေးဖြေ ဟူ၍လည်း ထပ်မံ သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားရှိလေသည်။
ပထမအဆင့်ဖြင့်သည့် ‘အခြေခံ စာသင်တန်း’ ရဲ့ အသင်း စဉ်းမျဉ်း ဥပဒေသအရ အာဂုံ ပြန်ဆိုခြင်း ကိစ္စကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေဆိုနိုင်ပါမှ ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ သဘော ရေးဖြေကို ဖြေဆိုခွင့် ရကြမှာ ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့် အရာမှ လွယ်ကူလှသည်ကား မရှိလှချေ . . . အခါခပ်သိမ်း လွယ်ကူ ချော်မွေ့နေပါက ဘယ်မှာ အခက်အခဲဆိုတာ ရှိအံ့မည်နည်း။ဒါကြောင့် ထို ‘ပရိယတ္တိ သာသနာဟိ အသင်းကြီး’ က ကျင်းပသော သကျသီဟ (အဘိဝံသ) ဘွဲ့သည်ကား ရဖို့ မလွယ်ကူလှသလို့ အင်မတန်မှလည်း အခက်အခဲပါဘိ။
ထို ‘သကျသီဟ (အဘိဝံသ) စာမေးပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့ကျော် လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ “လူသတ် စာမေးပွဲ” ဟု ဤသို့ မိန့်တော်မှုလေသတည်း . . .
သီးခြား စာသင်တန်းရဲ့ ပြဌာန်း ကျမ်းစာများထိုသီးခြား စာသင်တန်း၌ ပြဌာန်း ကျမ်းစာများသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ငှင်းတို့ကား . . .
(၁) : – ဒွေမာတိကာ (ဝိနည်းငယ်နှစ်စောင်)
(၂) : – ကစ္စည်း သဒ္ဒါကြီး (သဒ္ဒါ-ရှစ်စောင်တွဲ)
(၃) : – အဘိဓမ္မတ္ထ သင်္ဂဟ (သဂြိုလ်)
(၄) : – ကစ္စာယနသာရ
(၅) : – ဘေဒစိန္တာ
(၆) : – အဘိဓာန်
(၇) : – ဆန်းကျမ်း
(၈) : – ပုဒ်စစ်
(၉) : – သဒ္ဒါစစ်
(၁၀) : – သံဝဏ္ဏနာ
(၁၁) : – နည်းလေးဆယ်
(၁၂) : – မာတိကာ
(၁၃) : – ဓာတုကထာ
(၁၄) : – ယမိုက် (အောက်ငါးကျမ်း) ဟူ၍ အသင်းကြီးရဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအရ ပြဌာန်းထားရှိကြပါသည်။
ထိုထို ပြဌာန် ကျမ်းစာတို့ကို ‘အာဂုံ (လွတ်) ကျေပွန်မှသာ အသင်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန်အတွက် သင့်မြတ်လှပေ၏။ထိုမှ မဟုတ်ပါက (ဝင်ရောက် ဖြေဆိုပါက) မမြင်နိုင်တဲ့ အခက်အခဲ အပေါင်း များစွာ ကြုံတွေ့မည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲ ကျိန်းသေ ကြုံတွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသီးခြား စာသင်တန်း၌ အာဂုံ (လွတ်) ပြန်ဆိုခြင်းကို ဖြေဆို အောင်မြင်မှသာ ဆက်လက်၍ သဘော ရေးဖြေ ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ထို သီးခြား စာသင်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ကြသော အရှင်သူမြတ်များကို”ပရိယတ္တိ သာသန ဟိတ အသင်းကြီး” မှ ဂုဏ်ပြု ပူဇော်သောအားဖြင့် ဆွမ်း ဆန်တော်တို့ကို (၅) နှစ် ဆက်တိုက် ပေးအပ် လှူဒန်းမှုကို ခံထိုက်ပါပေ၏။
(“နယုန်လတွင် ထိုအသင်းစာမေးပွဲကို ပြုလုပ်-ကျင်းပပြီး ၊ စာအောင်ဆုကို ဝါဆိုလ၌ အောင်လက်မှတ် (ဘွဲ့လက်မှတ်) ဆက်ကပ် ပူဇော်ပါသည်” ဟု သိရှိထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။)ထို ‘သီးခြား စာသင်တန်း’ ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ဆက်လက်၍ စာချတန်း (ခေါ်) ဓမ္မာစရိယတန်းကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့် ရကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို စာချတန်း၌မှုလည်း အသက်တော်အားဖြင့် (၃၂) နှစ် ၊ ဝါတော် (၁၂) ဟု သတ်မှတ်ထားရှိလေသည်။စာချတန်း (ခေါ်) ဓမ္မာစရိယတန်းရဲ့ ပြဌာန်း ကျမ်းစာမျာထို ‘စာချတန်း (ခေါ်) ဓမ္မာစရိယတန်း၌ သင်ရိုး ညွှန်တမ်းများသည် အဓိအားဖြင့် ကျမ်းရင်း (၃) ကျမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို ကျမ်းရင်း (၃) ကျမ်း ဟူသည်ကား …
(၁) : – ပါရာဇိကဏ်
(၂) : – သီလက္ခန္ဓာ
(၃) : – အဋ္ဌသာလိနီ ဟူ၍ ကျမ်းရင်း (၃) ကျမ်းသည် ဘုရားဟောသော ပါဠိတော်၌ ပါဝင်ပါသည်။
ထို စာချတန်းကိုမှုလည်း ဆက်လက်ပြီး ကြိုးစားပိုင်ခွင့် (၅) နှစ်တာ အသက်တမ်း ရှိပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်နှစ်ထက် ကျော်လွန်ပါက အကြမ်းအားဖြင့် ‘သာခ’ ဟု အဘိဝံသ ဘွဲ့ကို ဆက်ကပ်ပါသည်။
‘သာခ’ ဟူသည် အဖျားဟု အဓိပ္ပါယရပြီး ၊ ‘မူလ’ သည်ကား အရင်းဟူ ဆိုစမှတ် ပြုကြလေ၏။ဆိုလိုသည်ကား သတ်မှတ်သည့် နှစ်အတွင်း ဖြေဆို အောင်မြင်ပါက “ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ မှုလဓမ္မာစရိယဘွဲ့” (သို့မဟုတ်) “သကျသီဟ အဘိဝံသ ဘွဲ့” ကို လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ၊
ထိုသတ်မှတ်နှစ် (၁၂ ဝါ ၊ ၃၂ နှစ်) မှ ကျော်လွန်သော အရှင်မြတ်များကို “ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ သာခဓမ္မာစရိယဘွဲ့” က်ို ဆက်ကပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းယနေ့ခေတ်ဝယ် အတိုကောက်အားဖြင့် သ.စ.အ ဟု သော်လည်းကောင်း ၊ (ဒါမှ မဟုတ်) သကျသီဟ အဘိဝံသဘွဲ့) ဟု သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုလာကြပါသည်။
“ပရိယတ္တိ သာသနဟိ သာခဓမ္မာစရိယဘွဲ့” ဟု ရေးလေ့ ရေးထ ယနေ့ခေတ်ဝယ် မရှိကြပေ . . . ။
သ.စ.အ ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်
‘သ’ ဆိုသည်မှာ သကျသီဟ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ကို ရည်ညွှန်ပြီး ၊ ပြည့်စုံလှသည့် အနက်အဓိပ္ပါယ်သည်ကား “ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့” ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထို ‘ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ အသင်းကြီး’ ၌ ကြီးမှူး ကျင်းပသော ဓမ္မာစရိယ (စာချတန်းဘွဲ့) ဖြစ်၍ ထိုအသင်းကို အစွဲပြုပြီး ၊ ‘ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့’ ဟုဤသို့ အမှတ်အသား နာယူရပါသည်။ (မန္တလေးမြို့၌ ထိုအသင်းကြီး တည်ရှိပါသည်။)
‘စ’ ဟူသည်ကား “ပရိယတ္တိ စေတီယင်္ဂဏဓမ္မာစရိယဘွဲ့ ” ဖြစ်ပြီး ၊ ထိုဘွဲ့က်ို “ရန်ကုန် အဘိ (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန် အဘိဝံသ စာတော်ပြန်ပွဲ” ဟု ရဟန်း-ရှင် / လူ အသိများကြ၏
ထိုအသင်းကို ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရင်ပြင်၌ ကြီးမှူးပြီး ၊ သာသနာတော်ရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်မြတ်များကို ပြုလုပ် ကျင်းပအပ်သောကြောင့် ‘ပရိယတ္တိ’ ဟု သော်လည်းကောင်း ၊
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်ကို အကြောင်းပြု၍ ဆင်နွှဲ့ ကျင်းပအပ်သောကြောင့် ‘စေတီယင်္ဂဏ’ ဟု သော်လည်းကောင်း အကြမ်းအားဖြင့် နားလည်ထားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
‘အ’ ဆိုသည်မှာ ‘အစိုးရ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့’ ကို အတိုကောက် အသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက် ဤသို့ ‘အ’ ဟု သိမြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ထိုစာမေးပွဲသည် အစိုးရ ပထမပြန် စာမေးပွဲ နှင့်အတူ ဆင်ယင် ကျင်းပအပ်သော ‘အစိုးရ ဓမ္မာစရိယ စာတော်ပြန်ဘွဲ့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစာမေးပွဲကို တစ်နိုင်ငံလုံးဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံမှ တရာဝင် အသိအမှတ်ပြု ကျင်းပအပ်သောကြောင့် ‘အစိုးရ’ ဆိုသည်ကို ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ထိုစာမေးပွဲတို့၌လည်း အဆင့်အားဖြင့် တရာဝင် (၄) ဆင့်ရှိပြီး ၊ အောင်မြင်ခဲ့သော အဆင့်အလိုက် အောင်လက်မှတ် (ဘွဲ့လက်မှတ်) တို့ကို အစိုးရမှ ချီးမြှင့်ပါသည်။
ထိုအဆင့် (၄) ဆင့်တို့သည်ကား …
(၁) : – အစိုးရ ပထမငယ်တန်း (အောင်လက်မှတ်)
(၂) : – အစိုးရ ပထမလတ်တန်း (အောင်လက်မှတ်)
(၃) : – အစိုးရ ပထမကြီးတန်း (အောင်လက်မှတ်) နှင့်
(၄) : – အစိုးရ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (စာချတန်း) ဟူ၍ (၄) ဆင့် သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားပါသည်။
ထိုစာချတန်းကို ဖြေဆို အောင်မြင်ပါက အစိုးရ တရာဝင် အသိအမှတ်ပြု ပေးအပ်သောကြောင့် ထိုဘွဲ့ကို ‘အစိုးရ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယဘွဲ့’ ဟု ခေါ်ဝေါ် အသုံးလျက် ရှိပါသည်။
ထိုအပြင် (ထိုအဘိဝံသဘွဲ့) ငါးနှစ်တိုင် ဆက်လက်၍ စာချတန်း၌ ပါဝင်သော အဋ္ဌကထာ ကျမ်းရင်း (၃) ကျမ်း (ပါရာဇိကဏ်၊ သီလက္ခန္ဓ၊ အဋ္ဌသာလိနီ) နှင့်
သက်ဆိုင်ရာ ဆန်း၊ အလင်္ကာ၊ ဥာသ်ကောက် အထက်ယမိုက်၊ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနှင့် တကွ ဋီကာ၊ အနူ၊ မဓု ဂဏ္ဌိ ယောဇနာ ကျမ်းများစွာတို့ကို သုံးရက်တိုင် ကျင်းပသော
စာမေးပွဲကိုလည်း ပြဌာန်းချက်အရ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရပါသည်။ထို စာချတန်းကို ဝင်ရောက် ဖြေဆို အောင်မြင်သော အရှင်မြတ်များကို ထိုအသင်းမှ ဆွမ်းဆန်တော် ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းကြပါသည်။
ထိုအသင်းတွေရဲ့ စာချတန်း (အဘိဝံသဘွဲ့) အတွက် ကျမ်းရင်း (၃) ကျမ်း ပါဠိတော် . အဋ္ဌကထာ . ဋီကာတို့ကို ကျေပွန်စွာလေ့လာကြရပါသည်။
နိုင်ငံတော်မှ ကျင်းပသော အစိုးရ ဓမ္မာစရိယရိုးရိုးဘွဲ့အတွက် သာရတ္ထဒီပနီဋီကာဝိမတိဋီကာ / အဘိနဝဋီကာ / မဓုယောဇနာတို့ မလိုသော်လည်းအဘိဝံသဘွဲ့ရဖို့ရာအတွက်မူ ပါဠိတော် / အဋ္ဌကထာနှင့် မလုံလောက် . ထိုဋီကာ စသည့်ကျမ်းမြတ် အဆူဆူတို့ကို ကြိုးကုတ် အားထုတ်နိုင်ပါမှ ဘွဲ့ရရှိဖို့အတွက် အတော်သင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ထိုအသင်း (အဘိဝံသဘွဲ့) ကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါက ဘွဲ့တော်၏ နောက်သွယ်၌ ‘အဘိဝံသ’ ဟူသော အမည်နာမကိုအစားထိုး၍ ခေါ်ဆိုကြရလေသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ထင်းရှားပြရလျှင် ဘွဲ့တော်သည် အရှင်ဝိစိတ္တ ဆိုကြပါစို့။
ဘွဲ့တော် : – အရှင်ဝိစိတ္တ
ပညာအရည်အချင်း : – ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ ဓမ္မာစရိယဘွဲံ (သကျသီဟ အဘိဝံသ)
အသုံးစွဲပုံ : – အရှင်ဝိစိတ္တာဘိဝံသ
ဟု အစားထိုး၍ အမြီးတိုကလေး ထပ် ဖြည့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအသင်း (အဘိဝံသဘွဲ့) ရရှိသူများကို ဥပမာလို ‘အရှင်ဝိစိတ္တာဘိဝံသ’ ဟု သိစေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ မစိုးရိမ် (တိုက်သစ် / တိုက်ဟောင်း) များ၌ အဘိဝံသဘွဲ့ (ပရိယတ္တိ သာသနဟိတဘွဲ့) ရရှိမှသာ စာချ (နာယက) အဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး ၊ ကျောင်းပိုင် တစ်ဆောင်ကိုလည်း ရရှိပါသည်။
ထို ‘ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ အသင်းကြီး’ ၌ အသင်းစာမေးပွဲများကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုကြမည် အရှင်သူမြတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း အင်္ဂါရပ် အချက်အလက်များနှင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိကြထားရပါမည် ဖြစ်ပါသည်။
သီးခြား စာသင်တန်းအတွက် အင်္ဂါရပ်များ
(၁) : – အစိုးရ ပထမပြန် ကြီးတန်း အောင်မြင်ထားရမည်။
(၂) : – ပထမပြန်ကြီးတန်းနှင့် တူမျှသော အရည်အချင်းရှိရမည်။
(၃) : – အသက် (၂၇) ၊ ဝါတော် (၇) အောက် ဖြစ်ရမည်။
(၁) : – ထိုသကျသီဟအသင်းမှ သီးခြား စာသင်တန်း အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
(၂) : – အသက်တော် (၃၂) ၊ ဝါတော် (၁၂) အောက် ဖြစ်ရမည်။
(၁) : – ပရိယတ္တိ သာသနဟိတ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (သကျသီဟဓမ္မာစရိယဘွဲ့) ၊ (မန္တလေး)
(က) : – သီးခြား စာသင်တန်း (အသက် (၂၇) ၊ (၇) ဝါအောက်)
(ခ) : – စာချတန်း (အသက် (၃၅) ၊ (၁၅) ဝါအောက်)
(၂) : – ပရိယတ္တိ စေတီယင်္ဂဏ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (ရန်ကုန်)
(က) : – သီးခြား စာသင်တန်း (အသက် (၃၀) ၊ (၁၀) ဝါအောက်
(၃) : – ပရိယတ္တိ သဒ္ဓမ္မပါလ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (မြင်းခြံ)
(၄) – ပရိယတ္တိ ပိဋကာလင်္ကာရ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (မုံရွာ)
(၅) : – ပရိယတ္တိ သုသမာစာရ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (မော်လမြိုင်)
(က) : – သီးခြား စာသင်တန်း (အသက် နှင့် ဝါ အကန့်အသတ် မရှိ)
(ခ) : – စာချတန်း (အကန့်အသတ် မရှိ)
(၆) : – ပရိယတ္တိ သာသနကာရီ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (ရေနံချောင်း)
(က) : – သီးခြား စာသင်တန်း (၃၀/၁၀ အောက်)
(၇) – ပရိယတ္တိ သာသနနုဂ္ဂဟ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (မန္တလေး)
(က) : – သီးခြား စာသင်တန်း (အကန့်အသတ် မရှိ)
(၈) : – ပိဋကတ္တယ ပါဠိ ပါရဂူဘွဲ့ (သထုံ)
(က) : – ပထမဆင့်မှ ပဉ္စမဆင့်အထိ အောင် အဘိဝံသဘွဲ့ကပ် (အကန့်အသတ် မရှိ)
(ခ) : – ဆဌမဆင့် နှင့် သတ္တမဆင့် (အကန့်အသတ် မရှိ)
(၉) : – ပရိယတ္တိ သဒ္ဓမ္မမာမက ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (ရန်ကင်းတောင်-အဘိဝံသ-PSD)
(က) : – အခြေခံ စာသင်တန်း
(ခ) : အဆင့်မြင့် စာသင်တန်း
(ဂ) : – စာချတန်း
(ထိုအသင်း၌ အသက် အကန့်အသတ်ထားခြင်း မရှိပါ … )
စကားချပ် – ထင်ရှားသော ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကမူ နိုင်ငံတော်က ဆပ်ကပ်သော ဘွဲ့တော်ကို အသုံးပြုလေ့မရှိပဲ သကျသီဟ အဘိဝံသဘွဲ့တော်ကို အမြဲလိုလို အသုံးပြုခဲ့သည်ကို ကြည်ညို သဒ္ဓါပွားများမိပါသည်။